iPhone ma hagaagsan doonaa? Marka aad u hagaagsan iPhone, waxaa laga yaabaa inaad qabto qaar ka mid ah dhibaatooyin ka oo aad ugu khasaare. Ha welwelin. In this article, waxaan ku qor soo baxay qaar ka mid ah su'aalaha iyo xal u dhiganta. Fadlan akhri on.
1. Sida loo dib App Haddii aan si sax ah u syncing?
Connect aad iPhone la computer iyo furi Lugood, guji "Codsiyada" bidixda (maktabadda music aad ka yar).
Raadi codsiga oo aad rabto in aad ka saarto liiska codsiga aad leedahay. Midig u guji ku yaal oo Faydi.
Markaas dooro "saarto" Maktabada.
Markaas dooro "dhaqaaji qashinka" ka Library Lugood ah.
Hadda hagaagsan aad iPhone. Marka aad la sameeyo, in la hubiyo in app ma aha ee aad iPhone.
Hadda download codsiga mar kale ka Lugood adiga oo isticmaaleya isticmaale account hore Apple oo Kolkaasuu mar kale u hagaagsan.
2. iPhone ma hagaagsan doonaa la Lugood, Waxa Aad Sameyn Karto?
Mararka qaarkood awoodin in aad u hagaagsan iPhone ama PC ma ogaan karaa aalad iPhone aad. Waxaa jira sababo badan waxa ka dambeeya, waxaad isku dayi kartaa habab kala duwan si ay u xaliyaan arimahan
Isticmaal cable USB kale haddii aad qabto in ay ku xidhmaan aad iPhone in computer.
Guuleysatey aad iPhone oo isku day mar kale u hagaagsan aad iPhone.
Guuleysatey your computer.
howleheedii your computer hagaajin karo arrimaha aan iPhone iyo sidoo. Waa fikrad fiican in reboot your computer ka hor inta aadan nooc kasta oo dhib sameeyo.
Hubi oo ku rakibi nooca ugu dambeeya ee Lugood haddii aadan ayaa booqday website Apple oo soo bixi version ugu dambeeyey-iyo-weyn, kaliya haddii ay dhacdo.
3. iPhone ma hagaagsan doonaa Music?
Mararka qaar marka aad updated aad iPhone 4 iyo Lugood Mac ee - wax walba syncs ganaax marka laga reebo music. Waxaad isku daydaa inaad u hagaagsan by playlist, artist, album oo ku sifayn si gooni gooni ah laakiin waxa laga yaabaa in ku xayiran on bar diyaarinaya. Waayo, kanu waxaan ku talinaynaa in ay unselect wax kasta tab kooban ee iPhone marka laga reebo si toos ah u hagaagsan marka iPhone xiran yahay. Guji "nidaameed heeso iyo videos kaliya la doortay" si hagaagsan music ama videos sida aad hor samayn.
4. Waa maxay New ee macruufka 8?
macruufka 8 waa Titanic u sameeysa oo aad u weyn oo loogu talagalay macaamiisha. Waxay leedahay qaabab cusub oo badan oo la xoojiyay iyo hawlaha taas oo nidaamka qalliinka mobile ugu horey adduunka sameeyo
Waxaad heli doontaa dhammaan sawiro iyo xog kale oo ku saabsan iPhone adigoo isticmaalaya iCloud.
Hadda fariimo iyo sheekaynta saaxiibada waa badan sahlan. Waxa wuxuu qaadanayaa hab cusub oo cod u diraan si ay wada hadal kasta oo. La wadaag video ah oo aad raadinayso saaxiibadaa kula meesha aad hada degan.
Waa kuwee iPhone hababka taageeri doonaa macruufka 8?
Badan oo ku saabsan arrimo 8 Baro Click Here
5. sidii ay u cusboonaysiiyaan iPhone App?
Waxaad ka eegi kartaa app updates aad iPhone by dhejinta waaraadka on buluug ah "App Store" icon ku yaal aad screen guriga aad iPhone. Markaas tuubada "Updates" badhanka midig hoose ee App Store ah.
2 Siyaabaha dhaqaaq MP3 in iPhone
Ka iPhone Bedelka Photo Llibrary in PC
Best 10 iPhone Transfer Software
Best 17 Apps on iPhone
1 Click to Copy ka iPhone in Android
> Resource > iPhone > Top 5 Su'aalaha Inta badan-weydiiyay iPhone nidaameed